August 2021 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Aug 31, 2021 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 24-01-1443…
Aqoon iyo Ogaal waa barnaamij todobaadle ah oo aan kusoo gudbino macluumaad iyo xogo muhiim ah oo ku saleysan Diinta Islaamka, Caafimaadka, Juqraafiyadda iyo arimo kale, waxaana maalin kasta oo Talaado ah aad kala socon…
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha dhulkeena Soomaaliya ayaa ku waramaya in maxkamadda islaamiga ee gobolkaas ay xukun dil ah ku fulisay haweeney katirsan milliteriga maamulka Hir Shabeelle. Haweeyneydan oo lagu…
Dhegeystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waaTalaado, Taariikhda hijriguna waxay ku…
Imaarada islaamiga ah ee Afqaanistaan ayaa u mahadcelisay guud ahaan muslimiinta caalamka oo ay sheegtay iney reer Afqaanistaan ku garab istaageen dagaalka ay la galeen ciidamada Maraykanka iyo Nato ee duulaanka ku tagay dalkaas. Muxamad…
Daawo Taxane: Ergadii Isku Dhiibay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.(02)
Idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa billowday baahinta qeybta labaad waraysiyo taxane ah oo ay la yeelatay qaar kamid ah ergadii soo xushey baarlamaanka dowladda federaalka, balse markii dambe isku dhiibay Xarakada Mujaahidiinta…
Askarigii Ugu dambeeyey Oo Shisheeye ah Oo Isaga baxay Afqaanistaan.
Dalka Afqaanistaan waxaa guud ahaan isaga baxay ciidamadii Maraykanka ee duulaanka ku joogay 20kii sano ee lasoo dhaafey, kuwaasoo maalmihii tagay ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul. Waxaa hadda dalka Afqaanistaan si…
Dhegeystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Talaado , Taariikhda hijriguna waxay ku…
Axmad	 Aug 30, 2021 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 23-01-1443…